Rwendo rwePurojekiti yeCraper Scraper yeWebra Scraping Yakapiwa neSemalt Expert
Kuwana dhiyabhorosi kubva kumawebhusayithi kana mapeji epaji mahwendefa uye maChema akasiyana-siyana. (CSV) yakaitwa nyore. Dhiyabhorosi yedhadharo, iyo inowanzonzi webwendefa ing, inzira yekubvisa deta yakawandisa kubva kumasero - gume sava letne.
Nzira yekushandisa sei Chrome Web Scraper
Kana usina ruzivo rwepurogiramu, web scraping software yakagadzirirwa iwe. Munguva pfupi yapfuura, imwe nzira nyore nyore yekushandisa yekutsvaga kwewebhu yakatangwa. Nokushandisa Google Chrome browser extensions inosununguka paGoogle webhupu, iwe zvino unogona kuita web scraping. Heino urongwa hweZvandanduridzo dze Chrome dzinofungidzirwa.
Chinyorwa chekuona chinyorwa ndechimwe chepamusoro zvakanyanya Chrome browser plugins iyo inowanzoshandiswa pakucheka screen. Nevatangi vekutanga, kuvhara kwepiritsi ndiyo nzira yekudhonza kunze uye kubvisa ruzivo kubva pamapeji ewebhu uye masayiti. Kana iwe usina unyanzvi hwekodhi, funga chinyorwa chekugadzirisa sezvo sarudzo yacho inongogadziriswa.
Dhiyabhorosi yakabviswa kubva panzvimbo dzakashandiswa neScreen Scraper Chrome plugin inogona kubudiswa se JSON kana CSV file. Iyi plugin inobatsira zvose XPath uye Element Selectors pattern. Screen Scraper iri nyore uye isingashandisi kushandiswa kunowanikwa zviri nyore muIndaneti yebindu.
Web Scraper iGoogle Chrome yakakura iyo inodzinga dhesi kubva pawebsite uchishandura mapepa.Zvinyorwa zvakadzorerwa kubva pawebsite zvinowedzera izvi zvinogona kuchengetwa mu CSV file kana CouchDB. Nyora kuti uone zvidzidzo zvakasiyana-siyana kana mapeji. Muzviitiko zvakawanda, iyi Chrome browser extension inoshandiswa kubvisa ruzivo rwakadai sehukama, zvinyorwa, uye matafura.
iMacro is Chrome browser Plugin inoshandiswa pakutsvaga kwewebhu uye kuwedzerwa kwedhesi.Macro inoshanda nekurekora zviito zvekupedzisira-user panguva yekushanyira.Indaneti iyi yekutsvaga Chrome inonyora mabasa pawebsite kuti ishandiswe munguva yemberi.
Nzira yekushandisa Chrome Web Scraper
Ne iMacro, unogona kutora mafayela nyore nyore uye yeuka password yako logins. , Internet Explorer, uye Chrom e browser.
Mazuva ano, kutsvaga zvakanyatsoratidzwa mashoko pawebsite hazvisi nyore. Apa ndiko kunotora software inouya. Data Miner iyi chrome browser extension inoshandiswa kubvisa ruzivo rwakakosha kubva pawebsite. Uchishandisa iyi browser plugin, unogona kuwana dheinheji kubva kune mawebhusayithi uye kutumira data kuGoogle Sheets kana Excel sheets.
Dhigirii reDhina rekuwedzera rinoshandiswa kuparadzanisa tafura dze HTML uye kutumira mashoko kune Microsoft Excel kana CSV file. Kana iwe uri nyanzvi pakushandisa XPath vasarudzo, iyi ndiyo browser browser iwe.